ဘောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့ ဝိတ်ချနည်းများ - For her Myanmar
ပိန်ချင်တယ် ပိန်ချင်တယ်ပဲ ထိုင်အော်ပြီး ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရင် ဝိတ်ကျလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ လှချင်တယ်ဆိုတာက လူအများစုရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပါ။ Body Goal တွေ Share ပေါင်းလည်း မနည်းဘူးလေ :3 ရှဲပြီးတော့ ဘာမှဆက်ဖြစ်မလာတော့ဘူးလေ 😀 😀 ဆိုတော့ ပိန်ချင်တယ်၊ တောင့်ချင်၊ ဖြောင့်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဘာမှမလုပ်ရင်လည်း ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လေ ကိုယ်တွေကမှ မလှချင်လည်း နေပေါ့.. ဘာမှမလုပ်ရပြီးရောဆိုပြီး နေလို့ ရသေးတယ်.. နိုင်ငံရပ်ခြားက သရုပ်ဆောင်တွေကျတော့ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ဖို့အတွက်ရယ်၊ နေရင်းထိုင်ရင်း လှနေဖို့ရယ် အဲလေ အမြဲလိုလို ကြည့်ကောင်းနေဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျစ်လျစ်လှပနေအောင် အမြဲထိန်းနေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘောလိဝုဒ်က မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေပေါ့။ ယောင်းတို့လည်း သိကြမှာပါ။
ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ အချိုးတကျ အမြဲတမ်းလိုလို လှပနေတာကိုပေါ့။ မင်းသမီးရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘောလိဝုဒ်မင်းသားတွေဟာလည်း အနည်းဆုံးတော့ အရပ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ သူတို့သာ အပျင်းထူနေခဲ့ရင် ခုယောင်းတို့သဘောကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် သူတို့ ဘယ်လိုကြိုးစားပြီး ဝိတ်အမြန်ချခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့ သိရအောင် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁) Arjun Kapoor
အလေးချိန် 140 kilo ရှိပြီး ၁၀ စက္ကန့်ထက်ပိုမပြေးနိုင်တဲ့ Arjun ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲသိချင်ရင် သူ့ရဲ့ နည်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး… သူဟာ weight training and cardio exercise, circuit training, crossfit training, bench press, squats, deadlifts, pull ups စတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ မပျက်မကွက် လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ၄ နှစ်အတွင်း ကီလို ၅၀ ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို ဝိတ်ကျစေတဲ့ အခြားအကြောင်းအရာကတော့ Salman Khan ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ”တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်နဲ့ Salman Khan လေ့ကျင့်ခန်းအတူတူလုပ်ကြပါတယ်။ သူဟာ အစားအသောက်ကိုလည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စားပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်လည်း နာတယ်ဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိတဲ့အထိ ရူးသွပ်သူပါ။ ကျွန်တော့ကိုလည်း တခြားဘာမှမသိရင်တောင် ဝိတ်တော့ကျရမယ်ဆိုတဲ့ စက်တစ်လုံးလို ဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်သွင်းပေးခဲ့တာလဲ သူပါပဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> ကြော့ကြော့မော့မော့နဲ့ ဗိုက်ချပ်စေမယ့် ဖြတ်လမ်းနည်း(၆)မျိုး
၂) Sonam Kapoor
Sonam ဟာ သူမရဲ့ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဒီလို အစာတွေကို ပုံမှန်စားခဲ့ရပါတယ်။
နံနက်- အုတ်ဂျုံနှင့် သစ်သီး
နေ့လယ် – ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ရိုတီ၊ ငါးကင် (သို့) ကြက်သားပြုတ်
ညနေစာ – ပေါင်မုန့်ညိုနှင့် ကြက်ဥအကာ
ညစာ – အရွက်ပြုတ်ရည်၊ ငါးကင် (သို့) ကြက်သားပြုတ်
ဗိုက်အရမ်းဆာတဲ့အခါ ပေါင်မုန့်ညို၊ ကြက်ဥအကာ၊ ပရိုတင်းဖျော်ရည်နဲ့ အသီးစားပါတယ်တဲ့။ ၁ လမှာ ၂ ခါလောက် detox လည်း လုပ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမရဲ့ ဝိတ်ချနည်းလေးပါ။
Related Article >>> လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ အဆီကျအောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲ?
၃) Alia Bhatt
ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ဖက်တီးမလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ alia ဟာ Student of the year ရုပ်ရှင်စရိုက်ဖို့အတွက် ၆လအတွင်း ပေါင် ၄၀ လောက် လျှော့ချခဲ့ရပါတယ်။ သူ(မ)ဟာ စားနေကျ အစားအသောက်တွေအစား ကြက်သားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုသာ စားခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၈ ကြိမ်ခွဲစားတာက အစာကို ပိုကြေစေပြီး အဆာပိုခံစေတယ်လို့ သူ(မ)က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်သလို တစ်ပတ်မှာ ၄ ရက်လောက် gym သွားပါတယ်တဲ့။ Cardio exercise ကိုတော့ နေ့တိုင်းလုပ်ပြီး ဝိတ်ကျပြီးတဲ့ နောက်မှာ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်လောက် ကြိုက်တာစားပြီး ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ ပုံမှန် diet လုပ်ပါတယ်တဲ့..
ဒါကတော့ ဝိတ်ချခဲ့ပြီး ပိုလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေပါ။ ဖတ်ရင်း အားမကျသွားကြဘူးလား ယောင်းတို့ရေ..သူတို့လို လှချင်တယ်၊ ပိန်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုတာလေးနဲ့ ရပ်တန့်နေလို့မရပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ချပြီး ခုတည်းက စလို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်လိုက်ပါတော့ ယောင်းတို့ရေ…
References : Style Craze , Bollywoodshaadis
ပိနျခငျြတယျ ပိနျခငျြတယျပဲ ထိုငျအျောပွီး ဘာမှမလုပျခဲ့ရငျ ဝိတျကလြာမှာမဟုတျပါဘူး။
ခန်ဓာကိုယျ ကဈြကဈြလဈြလဈြနဲ့ လှခငျြတယျဆိုတာက လူအမြားစုရဲ့ ဆန်ဒတဈခုပါ။ Body Goal တှေ Share ပေါငျးလညျး မနညျးဘူးလေ :3 ရှဲပွီးတော့ ဘာမှဆကျဖွဈမလာတော့ဘူးလေ 😀 😀 ဆိုတော့ ပိနျခငျြတယျ၊ တောငျ့ခငျြ၊ ဖွောငျ့ခငျြတယျဆိုပွီး ဘာမှမလုပျရငျလညျး ဘာမှဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေဲ့လေ ကိုယျတှကေမှ မလှခငျြလညျး နပေေါ့.. ဘာမှမလုပျရပွီးရောဆိုပွီး နလေို့ ရသေးတယျ.. နိုငျငံရပျခွားက သရုပျဆောငျတှကေတြော့ ဇာတျရုပျပီပွငျဖို့အတှကျရယျ၊ နရေငျးထိုငျရငျး လှနဖေို့ရယျ အဲလေ အမွဲလိုလို ကွညျ့ကောငျးနဖေို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ကဈြလဈြလှပနအေောငျ အမွဲထိနျးနရေပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဘောလိဝုဒျက မငျးသား၊ မငျးသမီးတှပေေါ့။ ယောငျးတို့လညျး သိကွမှာပါ။
ဘောလိဝုဒျမငျးသမီးတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှဟော အခြိုးတကြ အမွဲတမျးလိုလို လှပနတောကိုပေါ့။ မငျးသမီးရယျမှ မဟုတျပါဘူး။ ဘောလိဝုဒျမငျးသားတှဟောလညျး အနညျးဆုံးတော့ အရပျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမြိုး ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ သူတို့သာ အပငျြးထူနခေဲ့ရငျ ခုယောငျးတို့သဘောကတြဲ့ ခန်ဓာကိုယျမြိုး ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာလညျး မဟုတျဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ ဘယျလိုကွိုးစားပွီး ဝိတျအမွနျခခြဲ့ရတယျဆိုတာ ယောငျးတို့ သိရအောငျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
အလေးခြိနျ 140 kilo ရှိပွီး ၁၀ စက်ကနျ့ထကျပိုမပွေးနိုငျတဲ့ Arjun ဘယျလိုတှေ ပွောငျးလဲသှားလဲသိခငျြရငျ သူ့ရဲ့ နညျးလေးကို ဖတျကွညျ့ပါဦး… သူဟာ weight training and cardio exercise, circuit training, crossfit training, bench press, squats, deadlifts, pull ups စတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို စိတျအားထကျသနျစှာနဲ့ မပကျြမကှကျ လုပျခဲ့တာကွောငျ့ ၄ နှဈအတှငျး ကီလို ၅၀ ကသြှားခဲ့ပါတယျ။
သူ့ကို ဝိတျကစြတေဲ့ အခွားအကွောငျးအရာကတော့ Salman Khan ဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ”တဈခါတလမှော ကြှနျတျောနဲ့ Salman Khan လကေ့ငျြ့ခနျးအတူတူလုပျကွပါတယျ။ သူဟာ အစားအသောကျကိုလညျး ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး စားပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျလညျး နာတယျဆိုတာတောငျ ဘာမှနျးမသိတဲ့အထိ ရူးသှပျသူပါ။ ကြှနျတော့ကိုလညျး တခွားဘာမှမသိရငျတောငျ ဝိတျတော့ကရြမယျဆိုတဲ့ စကျတဈလုံးလို ဖွဈအောငျ စိတျဓာတျသှငျးပေးခဲ့တာလဲ သူပါပဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> ကွော့ကွော့မော့မော့နဲ့ ဗိုကျခပျြစမေယျ့ ဖွတျလမျးနညျး(၆)မြိုး
Sonam ဟာ သူမရဲ့ လှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ထိနျးသိမျးဖို့ ဒီလို အစာတှကေို ပုံမှနျစားခဲ့ရပါတယျ။
နံနကျ- အုတျဂြုံနှငျ့ သဈသီး
နလေ့ယျ – ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ ရိုတီ၊ ငါးကငျ (သို့) ကွကျသားပွုတျ
ညနစော – ပေါငျမုနျ့ညိုနှငျ့ ကွကျဥအကာ
ညစာ – အရှကျပွုတျရညျ၊ ငါးကငျ (သို့) ကွကျသားပွုတျ
ဗိုကျအရမျးဆာတဲ့အခါ ပေါငျမုနျ့ညို၊ ကွကျဥအကာ၊ ပရိုတငျးဖြျောရညျနဲ့ အသီးစားပါတယျတဲ့။ ၁ လမှာ ၂ ခါလောကျ detox လညျး လုပျပါတယျ။ ဒါကတော့ သူမရဲ့ ဝိတျခနြညျးလေးပါ။
Related Article >>> လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျဘဲ အဆီကအြောငျ ဘယျလိုတှလေုပျကွမလဲ?
ဆယျကြျောသကျတုနျးက ဖကျတီးမလေးဖွဈခဲ့တဲ့ alia ဟာ Student of the year ရုပျရှငျစရိုကျဖို့အတှကျ ၆လအတှငျး ပေါငျ ၄၀ လောကျ လြှော့ခခြဲ့ရပါတယျ။ သူ(မ)ဟာ စားနကြေ အစားအသောကျတှအေစား ကွကျသားနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုသာ စားခဲ့ပါတယျ။ တဈနကေို့ ၈ ကွိမျခှဲစားတာက အစာကို ပိုကွစေပွေီး အဆာပိုခံစတေယျလို့ သူ(မ)က ပွောပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျသလို တဈပတျမှာ ၄ ရကျလောကျ gym သှားပါတယျတဲ့။ Cardio exercise ကိုတော့ နတေို့ငျးလုပျပွီး ဝိတျကပြွီးတဲ့ နောကျမှာ တဈပတျကို တဈရကျလောကျ ကွိုကျတာစားပွီး ကနျြတဲ့ရကျတှမှောတော့ ပုံမှနျ diet လုပျပါတယျတဲ့..
ဒါကတော့ ဝိတျခခြဲ့ပွီး ပိုလှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ကွတဲ့ ဘောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတှပေါ။ ဖတျရငျး အားမကသြှားကွဘူးလား ယောငျးတို့ရေ..သူတို့လို လှခငျြတယျ၊ ပိနျခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ ဒီဆိုတာလေးနဲ့ ရပျတနျ့နလေို့မရပါဘူး။ ဆုံးဖွတျခကျြ ခိုငျခိုငျမာမာ ခပြွီး ခုတညျးက စလို့ ကွိုးစားလကေ့ငျြ့လိုကျပါတော့ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Bollywood, cele, Fitness, Knowledge, Train, ways
Miko November 27, 2017